Mini Pocket Selfie RC Drone with HD Wifi Camera - White gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Features: Xakamaynta fog, Flashing
Baar Baangare: 2 * Baabuurka AAA (Lama daro)
Age Range: > 14 sano jir
Amraya Time: ku saabsan daqiiqado 45
Xidhmada ka mid ah: USB Cable, Shirkad, Sanduuqa Asaliga ah, Muuqaal, Tilmaamo Hagaajin, Beteriyada
Waxyaabaha: Baakadaha, Birta
Cabirka: 10 * * 6.3 0.95cm
Number Model: H49WH SOL
Waqtiga waxqabadka: 7-8 min
Fogaanta fog: Mitirka 30 / 100ft
Magaca alaab: H49WH SOL
Badeecada badeecadda: 3.7V 250mAh (Biyaha la dhisay)
Badeecada gudbinta: Baabuurka 2V 1.5V AAA (Aan ku jirin)
Wakhtiga la bixinayo: Ku saabsan 45mins
Waqtiga waqtiga: 5-6mins
Masaafada R / C: 30m
Midabka: Cadaan / Madow
Qalabka: Qeybaha elektarooniga ah, caag ah
Cabbirka xirmada: 16x9.2x5.3cm
Iyada oo Awooda Foldable Auto, hal fur furan.
Diyaargarow cusub oo aan leenahay, kamaradda 720P ayaa kuu ogolaanaysa inaad si isdaba-joog ah u hesho is-qabad fiican.
Iyada oo la xakameynayo jidhka iyo mugdiga fog ee dhaadheer, cabbirka yar, fududahay inuu qaado.
Iyada oo kor u dhaafsiisan, hawlgalka qaabku wuxuu bixiyaa duulimaad deggan.
Nidaamka Isku-dhafan ee Wifi-ga ah ee nidaamka FPV kaas oo ku qabsan kara sawirada iyo cajaladaha fiidiyowga ee xasuustaada weyn.
Iyada oo aan lahayn Muuqaal la'aan, uma baahna in la hagaajiyo booska diyaaradaha inta aan la duulin.
Waxaa loo xakameyn karaa mashiinka iyo telefoonka gacanta.
1 x 3.7V 250MAH Batariga (Bamka la dhisay)